Fotoana fohy taorian’ny nivoahany ny fonja dia nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Mahery Lanto Manandafy, zanaka lahin’ilay mpanao politika goavana sady filohan’antoko, Manandafy Rakotonirina.
Tamin’izany no nisaoran’i Mahery Lanto Manandafy ireo rehetra nanohana azy tamin’ny serasera na haino aman-jery sy gazety, ireo nanampy azy « nanatitra sakafo, kidoro, lamba, akanjo, vatsy. Tonga tao na ny mpanohitra na ny mpanohana ».
« Momban'i Docteur Benessy, efa nataoko ihany moa ilay izy ny andron'iny fa mbola mamerina fialantsiny ampahibemaso eto ary miombon-kalahelo amin'ny voina nahazo azy. Saingy na izy aza tsy nahalala akory hoe : « transféré » aty Toamasina aho », hoy hatrany i Mahery Lanto Manandafy.